जनतासँग हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको छु : तिम्सिना — Purbicommand
२०७७ आश्विन १०, शनिबार ०३:२२ गते
म त ढुक्कसँगले भन्छु– अधिकार घर–घरमा मात्र होइन, कोठा–कोठामा आइपुगेको छ । यसको प्रयोग गर्ने कसरी ? हामीकहाँ अलिकति समस्या छ । न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा हिजो अदालत जान नसक्ने, गए पनि जुनिभर मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आज स्थानीय न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको छ । यो अधिकार अनुभूति गर्ने विषय होइन र ? हिजो निश्चित व्यक्तिका तजबिजीमा भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको बजेट छुटिन्थ्यो, अहिले प्रत्येक वडामा वडा भेला डाकेर र अनिवार्य ५ जना प्रतिनिधिहरू बसेर मात्र बजेट अन्तिम टुंगो लाग्छ । यो घर–घरमा आएको अधिकार होइन र ? हिजो सस्याना प्रशासनिक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रालय काठमाण्डौं, परराष्टमन्त्रालय काठमाण्डौं जानुपर्ने वाद्यकारी अवस्था थियो, अहिले यी सबै कामहरू यहिँ स्थानीय पालिका सरकारको टेबलबाट हुन्छ । यो सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा आएको भएन र ? जीवन निर्वाहको सन्दर्भमा गाँस, बास र कपासको सवाललाई स्थानीय जनसहभागितामा समृद्धि खोजेर यसलाई हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो । अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प छैन ।